အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၈ ( San Francisco ၊ Cable Car ၊ SF Bay Cruise & Lombard St ) ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၈ ( San Francisco ၊ Cable Car ၊ SF Bay Cruise & Lombard St ) ။	16
အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၈ ( San Francisco ၊ Cable Car ၊ SF Bay Cruise & Lombard St ) ။
Posted by Foreign Resident on Mar 14, 2016 in Travel | 16 comments
၁၃ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။
ဒီနေ့ မနက်တော့ Hotel မှာ နေ့လည်စာစားပြီး ၊
ဝယ်ထားတဲ့ Airport Transfer က လာကြိုတဲ့ကားနှင့် ၊
LV လေဆိပ်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။
LV လေဆိပ် မှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိတာကတော့ ၊
လေဆိပ်ထဲ က Shoe Shine ဖိနပ်တိုက်တဲ့ နေရာလေးပါ ။
ဈေးလေးတွေကတော့ ဗဟုသုတ သိရတာပေါ့လေ ။ ပုံစံက ဟိုးရှေးရှေးထဲက လုပ်ခဲ့ပုံရတဲ့ ရှေးဟောင်းပုံစံလေးပါဘဲ ။
Leather Shoe သာ ဝတ်လာမိခဲ့ရင် အမှတ်တရ ဝင်တိုက်မိမှာဘဲ ။
LV လေဆိပ်ထဲ က Shoe Shine ဖိနပ်တိုက်တဲ့ နေရာလေးပါ ။
18. LV လေဆိပ်ထဲ က Shoe Shine ဖိနပ်တိုက်တဲ့ နေရာလေးပါ ။
လေယာဉ်က LV ကနေ ၁၁း၅၅ မှာထွက်ပြီး ၊
San Francisco ကို ၀၁း၃၀ မှာ ရောက်ပါတယ် ။
LV နှင့် SF ကို မောင်းချိန် ၁း၃၀ လောက်ဘဲ ကြာပါတယ် ။
San Francisco မြို့ဟာ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ ၊
West Coast မှာတည်ရှိပြီး ၊ လူဦးရေ ၈ သိန်းလောက် နေထိုင်ကာ ၊
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ နေစရိတ် စားစရိတ် အကြီးဆုံး မြို့လို့ ပြောကြပါတယ် ။
San Francisco မြို့မှာ ထူးခြားတာ တစ်ခုကတော့ ၊
မြို့ကွက်တွေဟာ တကယ့် လေးထောင့်ကျကျတွေ ဖြစ်နေတာပါဘဲ ။
အဘတို့ တည်းတဲ့ Fusion Hotel က Civic Centre နားမှာရှိပြီး ၊
ဘေးနား ပါတ်ချာ မလှမ်းမကမ်း တွေမှာ ၊ လမ်း ၅ မိနစ်လျှောက် အတွင်းမှာ ၊
San Francisco ရဲ့ နာမည်ကျော် Cable Car / Tram ဂိတ်ဆုံး နှင့် ၊
West Field San Francisco Shopping Centre တွေရှိနေတော့ ၊
နေရ ထိုင်ရ တာ သွားရ လာရ တာ စားရ သောက်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် ။
18. အဘတို့ တည်းတဲ့ Fusion Hotel က Civic Centre နားမှာရှိပြီး ၊
San Francisco က တည်းမယ့် Fusion ဟိုတယ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ချပြီးတာနှင့် ၊
San Francisco ရဲ့ နာမည်ကျော် Cable Car / Tram စီးဖို့ သွားကြပါတယ် ။
Powell St & Market St ထောင့်က Cable Car / Tram ဂိတ်ဆုံး ကိုသွားပါတယ် ။
ကံက ကောင်းချင်တော့ အဲ့ဒီ့ Tram ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က ၊
သူမှာပိုနေတယ် ဆိုတဲ့ လက်မှတ်တွေ ဈေးလျော့ လာရောင်းပါတယ် ။
အဲ့ဒါနှင့်ဘဲ ၂ ယောက် ၂ ရက်စာ Ticket ကို 20 US$ နှင့် ဝယ်လိုက်ပါတယ် ။
ဂိတ်ဆုံးမှာတော့ Cable Car / Tram ၃ စီးလောက် တန်းစီ ရပ်ထားပါတယ် ။ ၁၀ မိနစ်ကို တစ်စီးလောက်လဲ ဟိုဘက်ကနေ ဆင်းချလာပါတယ် ။
San Francisco ရဲ့ နာမည်ကျော် မစီး မဖြစ် Tram ဆိုတော့ ၊
စီးမယ့် Tourist တွေက များလွန်းတော့ ၊
Tram ၃ စီးစာလောက် Tourist တွေ တန်းစီ စောင့်နေရပါတယ် ။
ထွက်ချိန်ရောက်ရင် ဂိတ်ဆုံးက Turn Table ကြီးမှာ ၊
လူအားနှင့် Tram ကို တွန်းပြီး ခေါင်းလှည့်လိုက်ပါတယ် ။
ရှေ့ဆုံးက တန်းစီနေတဲ့ Tourist တွေ ဝမ်းသာ အားရ လုတက်ကြပါတယ် ။
ထိုင်ခုံ မရတဲ့သူတွေကလည်း ဝမ်းသာ အားရ မတ်တပ် / တွယ်စီးကြပါတယ် ။
အဘတို့ Tram ပေါ်က အကုန်လုံး လိုလိုက Tourist တွေချည်းပါဘဲ ။
ဟုတ်တယ်လေ ၊ နာရီဝက်လောက် တန်းစီ စောင့်စီးရတာ ၊
San Francisco မြိုသား အစစ် အလုပ်သွားရမယ့်သူက ဘယ်စီးမလဲ ။
လူပြည့်တာနှင့် Tram ဟာ San Francisco Down Town ဘက်ထွက်လာပါတယ် ။
လမ်းမှာ အသွား အပြန် Tram အချင်းချင်း ဆုံရင် အော်ဟစ် နှုတ်ဆက်ကြပေါ့ ။ မြို့ထဲ Down Town က Fisherman’s Wharf ဆိပ်ကမ်းနားမှာ ဆင်းလိုက်ပါတယ် ။
ဂိတ်ဆုံးမှာတော့ Cable Car Tram ၃ စီးလောက် တန်းစီ ရပ်ထားပါတယ်
18. ဂိတ်ဆုံးမှာတော့ Cable Car Tram ၃ စီးလောက် တန်းစီ ရပ်ထားပါတယ်
ဂိတ်ဆုံးက Turn Table ကြီးမှာ လူအားနှင့် Tram ကို တွန်းပြီး ခေါင်းလှည့်လိုက်ပါတယ် ။
18. ဂိတ်ဆုံးက Turn Table ကြီးမှာ လူအားနှင့် Tram ကို တွန်းပြီး ခေါင်းလှည့်လိုက်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ Tram မေါင်းတဲ့ Driver နေရာပါ ။
18. ဒါကတော့ Tram မေါင်းတဲ့ Driver နေရာပါ ။
လမ်းမှာ အသွား အပြန် Tram အချင်းချင်း ဆုံရင် အော်ဟစ် နှုတ်ဆက်ကြပေါ့ ။
18. လမ်းမှာ အသွား အပြန် Tram အချင်းချင်း ဆုံရင် အော်ဟစ် နှုတ်ဆက်ကြပေါ့ ။
အဲ့ဒီမှာ Golden Gate ( Sanfrancisco ) Bay Cruise ဆိုတဲ့ ၊
Golden Gate တံတားကြီး နှင် Sanfrancisco Bay တစ်လျှောက် ၊
သင်္ဘော နှင့် ပါတ်ကြည့်မယ့် Cruise ခရီးစဉ်ကို ၊
၂ ယောက်စာ ၅၆ ဒေါ်လှ နှင့် ဝယ်လိုက်ပါတယ် ။
ညနေ ၅ နာရီမှာ Bay Cruise သင်္ဘော စထွက်ပါတယ် ။
Sanfrancisco Bay တစ်လျှောက် Golden Gate တံတားကြီး
The Rock ရုပ်ရှင်ထဲက Alcatraz ကျွန်း စသဖြင့် လှည့်ပါတ်ပြပါတယ် ။
ဒါကတော့ အဘတို့စီးတဲ့ Golden Gate ( Sanfrancisco ) Bay Cruise သင်္ဘောပါ ။
18. ဒါကတော့ အဘတို့စီးတဲ့ Golden Gate ( Sanfrancisco ) Bay Cruise သင်္ဘောပါ ။
ပြတိုက် လုပ်ထားတဲ့ စစ်သင်္ဘော အဟောင်းကြီး ပါ ။
18. ပြတိုက် လုပ်ထားတဲ့ စစ်သင်္ဘော အဟောင်းကြီး ပါ ။
ဒါက နာမည်ကျော် Golden Gate တံတားကြီး အောက်က ဖြတ်နေစဉ်ပေါ့ ။
18. ဒါက နာမည်ကျော် Golden Gate တံတားကြီး အောက်က ဖြတ်နေစဉ်ပေါ့ ။
The Rock ရုပ်ရှင်ထဲက Alcatraz ကျွန်း ။
18. The Rock ရုပ်ရှင်ထဲက Alcatraz ကျွန်း ။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ၊ ရွက်လှေ ကလေးတွေကော ၊
လေထီး နှင့် ၊ ရွက် နှင့် Surf လုပ်နေသူတွေကော အစုံတွေ့ရပါတယ် ။
သူတို့က တမင်အစွမ်းပြပြီး အဘတို့ သင်္ဘောလှိုင်းကို ကပ်ပြီးတောင် စီးပြနေပါတယ် ။ Cruise ခရီးစဉ်က တစ်နာရီ အတိကြာပြီး ညနေ ၆ နာရီမှာ ပြန်ရောက်ပါတယ် ။
ရွက်လှေ ကလေးတွေကော ၊ လေထီး နှင့် ၊ ရွက် နှင့် Surf လုပ်နေသူတွေကော ။
18. ရွက်လှေ ကလေးတွေကော ၊ လေထီး နှင့် ၊ ရွက် နှင့် Surf လုပ်နေသူတွေကော ။
သူတို့က တမင်အစွမ်းပြပြီး အဘတို့ သင်္ဘောလှိုင်းကို ကပ်ပြီးတောင် စီးပြနေပါတယ် ။
18. သူတို့က တမင်အစွမ်းပြပြီး အဘတို့ သင်္ဘောလှိုင်းကို ကပ်ပြီးတောင် စီးပြနေပါတယ် ။
Celebrity Cruise သင်္ဘောကြီး နှင့် San Francisco မြို့ ရဲ့ မြင်ကွင်းကျယ် ။
18. Celebrity Cruise သင်္ဘောကြီး နှင့် San Francisco မြို့ ရဲ့ မြင်ကွင်းကျယ် ။
ဗိုက်ကလည်း အတော်ဆာလာတာမို့ အဲ့ဒီ Fisherman’s Wharf မှာဘဲ ၊
ရောင်နေတဲ့ Seafood & Fish & Chips ဘဲ ဝယ်စားလိုက်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ ဆိပ်ကမ်းက ဇင်ယော်တွေက အကောင်ကြီးပြီး ၊
လူလစ်ရင် လူ လက်ထဲက အစာတွေကိုပါ ဝင်လုစားတတ်ပါတယ် ။
ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ ၊ လူကောင်ငယ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းလာတဲ့ Asian ကောင်မလေးရဲ့ စားစရာတွေကို ဇင်ယော်တွေက ဝိုင်းလုစားကြလို့ ကောင်မလေး ရှောင်ပေးရပါတယ် ။
ကမ်းနားမှာ ဖျော်ဖြေရေးသမား ( Street Performer ) တစ်ဦးက ဖျော်ဖြေနေပြီး ၊
အဲ့ဒီ ဖျော်ဖြေရေးသမား ကို ပိုက်ဆံထည့်ပြီး ၊ Tourist လို့ ထင်ရတဲ့ ၊
အမျိုးသမီး သီးသန့် စက်ဘီးသမား အုပ်စု တစ်စုက ဝိုင်းကနေကြပါတယ် ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်တတ်တဲ့ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာလေး တစ်ခုပေါ့လေ ။ တစ်ဦးတည်းလာတဲ့ Asian ကောင်မလေးရဲ့ စားစရာတွေကို ဇင်ယော်တွေက ဝိုင်းလုစားကြ
18. တစ်ဦးတည်းလာတဲ့ Asian ကောင်မလေးရဲ့ စားစရာတွေကို ဇင်ယော်တွေက ဝိုင်းလုစားကြ
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်တတ်တဲ့ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာလေး တစ်ခုပေါ့လေ ။
18. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်တတ်တဲ့ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာလေး တစ်ခုပေါ့လေ ။
စားပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ လင်းထိန်နေသေးတာမို့ ၊
ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်ပြီး Tram ဂိတ်ဆုံးကို သွားပါတယ် ။
အဲ့ဒီကနေ Tram စီးပြီး SF ရဲ့ နာမည်ကျော် Lombard Street ကိုသွားပါတယ် ။
Lombard Street ဟာ ကုန်းဆင်း တစ် ဘလောက် အတွင်းမှာ ၊
U Turn လောက်နီးနီး အကွေ့ ၈ ခု ရှိတဲ့အတွက် ကျော်ကြားနေတာပါ ။
အဲ့ဒီ Lombard Street မှာ တမင်လာမောင်းနေတဲ့ ၊
ကားတွေ ၊ မေါ်တော် ဆိုင်ကယ် တွေကလည်း မပြတ်ပါဘူး ။
Lombard Street ကနေ ပြန်ထွက်လာတော့ မှောင်စပြုနေပါပြီ ။
ဒါနှင့်ဘဲ Tram ကို ဂိတ်ဆုံး အထိစီးပြီး တည်းတဲ့ Hotel ကို ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒါက အကွေ့ ၈ ခုရှိတဲ့ Lombard Street ကို အပေါ်က မြင်ကွင်း ။
18. ဒါက အကွေ့ ၈ ခုရှိတဲ့ Lombard Street ကို အပေါ်က မြင်ကွင်း ။
ဒါက အကွေ့ ၈ ခုရှိတဲ့ Lombard Street ကို အောက်ဘက်က ပြန် ရိုက်ထားတာ ။
18. ဒါက အကွေ့ ၈ ခုရှိတဲ့ Lombard Street ကို အောက်ဘက်က ပြန် ရိုက်ထားတာ ။
Tram ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ တောင်ကုန်း အနိမ့်အမြင့်တွေနှင့် San Francisco မြို့ မြင်ကွင်း ။
18. Tram ပေါ်ကမြင်ရတဲ့ တောင်ကုန်း အနိမ့်အမြင့်တွေနှင့် San Francisco မြို့ မြင်ကွင်း ။
Foreign Resident has written 200 post in this Website..
View all posts by Foreign Resident →	Blog
ခင်ဇော် says: အဟိ။
မြို့လေးထောင့်ဆိုတော့ မန်းလေးမြို့ ကို သတိရသွားပြန်ရော။
လမ်းတွေ မှတ်ရတာ လွယ်မှာပေါ့။
အဲဒီ သီချင်းနားထောင်ကာစက အားကျတာ။
ကိုယ့်မြို့လေးကို မြင်ယောင်လာချင်စိတ်ပေါက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် ဆိုပြီး တေးရေးဆရာကို အားကျတာ။
ခါတလေ နတ်ပြည်တို့ ငရဲတို့ ဟာ သေလွန်ပြီးမှ ရောက်နိုင်တာမဟုတ် ဆိုတာကို လက်ခံမိတယ်။
kai says: အင်း..ဆန်ဖရန်ကိုချောင်းပေါက်အောင်သာသွားနေတာ…
အဲဒီ ကေဘယ်ကားတွေမစီးဖူး…။ သင်္ဘောမစီးဖူး..။
ဂေးတွေရဲ့မြို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟုတ်ပ အိုင်ခုရာ
မစီး ဖြစ် မရောက်ဖြစ်ပါကောလားဗျာ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ငင်
မြေပုံထဲ ဘယ်လောက်မှ ဝေးဘူး ငိငိ
ဇင်ယော် အကြောင်းပြပြီး ကန်မလေးဂို
အဲဒါ အိုင်ခုခြံ ဂေါင်းရင်းက
တရုတ်မ ဂုအောင်ပေး တဲ့
kai says: la to sf ကားနဲ့တောင်မိုင်၃၈၀ကျော်…..။ Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: (ညနေ ၅ နာရီမှာ Bay Cruise သင်္ဘော စထွက်ပါတယ် ။
The Rock ရုပ်ရှင်ထဲက Alcatraz ကျွန်း စသဖြင့် လှည့်ပါတ်ပြပါတယ် ။)……… မြစ်ထဲလှည့်ပြတာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဗျ။
ဓာတ်ပုံတွေက အယူအဆကောင်းလို့လားမသိ လည်ချင်စဖွယ် လှပါရဲ့ဗျာ။
kai says: အဲဒါပင်လယ်ကြီးဗျ.. မြစ်မဟုတ်..။
ဆန်ဖရမ်ဆိုတာက.. ပင်လယ်ထဲ အစွယ်လေးလိုထွက်နေတဲ့ ကျွန်းစွယ်လေးထိပ်ပေါ်တည်ထားတာလေ..။ အဲဒါကြောင့် တံတားတွေကနေ မြို့ထဲဝင်ရင် ၅ဒေါ်လာကောက်တယ်…
ခင်ခ says: ဟုတ်ပါပြီ သဂျီးရေ။ သိဘူးလေဗျာ။
uncle gyi says: san francisco မြို့ကွက်ကမန်းလေးကိုလာကြည့်ပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်ထင်တယ်နော်
kai says: ဟုတ်မှာ…
မန္တလေးက ဗျာဒိတ်ရမြို့ဆိုတော့လေ.. The Yelamu group of the Ohlone people resided inafew small villages when an overland Spanish exploration party, led by Don Gaspar de Portolà, arrived on November 2, 1769, the first documented European visit to San Francisco Bay. Seven years later, on March 28, 1776, the Spanish established the Presidio of San Francisco, followed byamission, Mission San Francisco de Asís (Mission Dolores), established by the Spanish explorer Juan Bautista de Anza.
Ma Ma says: ပုံထဲကြည့်ရတာ မြို့လေးက လှသားပဲ။
အနောက်နိုင်ငံလို့ဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ စက်ရုပ်ဆန်ဆန်ပဲ မြင်မိနေတာ။
kai says: ရောက်ရင် မပြန်ချင်ဖူးဖြစ်သွားမယ်..အမတော်..။ တကယ်ပြောတာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4113
Foreign Resident says: Ma Ma says:
” အနောက်နိုင်ငံလို့ဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ စက်ရုပ်ဆန်ဆန်ပဲ မြင်မိနေတာ ”
အမှန်ကတော့ ၊ ဘာသာစကား မပေါက်တာနှင့် ၊
ကြီးပျင်းလာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကွာလို့ပါ ။
( မဆလခေတ် ကတည်းက ရိုက်သွင်းထားတဲ့ ၊
အရင်းရှင် စသဖြင့် အတွေးဆိုးတွေကြောင့်လဲ ပါသပေါ့ )
သူတို့ဆီမှာလည်း သူ့နည်း သူ့ဟန် သူ့ဘာသာစကား နှင့် ၊
လွမ်းမောစဖွယ်တွေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ကြည်နှုးစရာတွေ လှပမှုတွေ ရှိပါတယ် ။
သြော် ၊ အားလုံးဟာ လူ တွေဘဲလေ ။
အောင် မိုးသူ says: နောက်ဆုံးပုံလေးကို The Princess Diary ရုပ်ရှင်းကားထဲမှာ မှတ်မိတယ်။ ရောက်ဖူးချင်တယ်လို့ပဲ နှုတ်ကရေရွတ်မိတော့တယ်။
Foreign Resident says: အောင် မိုးသူ says:
” နောက်ဆုံးပုံလေးကို The Princess Diary ရုပ်ရှင်းကားထဲမှာ မှတ်မိတယ် ”
အနု အလှ Drama ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်သူ ခံစားတတ်သူတွေပေါ့ ။
အဘက အနု အလှ Drama ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ခဲတယ် ။ အိပ်ပျော်သွားလို့ ။
အဲ့ဒဟာနှင့် ၊ Action ရုပ်ရှင်တွေဘဲ ကြည့်ဖြစ်တယ် ။
San Francisco နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အမှတ်မိဆုံး ရုပ်ရှင်ကတော့ ၊
Sean Connery နှင့် Nicolas Cage ပါတဲ့ ” The Rock ” ရယ် ။
အဲ့ဒဟာနှင့်ဘဲ ” The Rock ” or ” The Alcatraz ” ကို ၊
မရောက်ရောက်အောင် သွားခဲ့တယ် ။
The Rock ထဲက Navy SEAL ပြန်ပြောတဲ့ စကားလေး ။
” Commander Anderson:
Sir, we know why you’re out here. God knows, I agree with you. But like you,
I swore to defend this country against all enemies, foreign, sir… and domestic.
General, we’ve spilled the same blood in the same mud.
And you know god damn well I can’t give that order. “
Thint Aye Yeik says: နာမည်ကျော် Golden Gate တံတားကြီး ပေါ် အရမ်းရောက်ဖူးချင်တယ်… .လောလောဆယ် ခိုင်ထူး သီချင်း… အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်…ဆိုတာကိုပဲ ဆိုနေတယ်…
တစ်နေ့တော့… နီးရမယ်…. စိတ်မလျှော့နဲ့လေ….
အားလုံးကို ကျော်….ဖြတ်ရမယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.